जाभास्क्रिप्ट - खुला स्रोत को लागी एक नयाँ ज्वरो - बेंटले प्रणाली को मामला मा प्रवृत्ति - Geofumadas
डिसेम्बर, 2018 नवाचारै, Microstation-बेन्टले
हामी सँधै सफ्टवेयर बेच्न सक्दैनौं, हामी सफ्टवेयर परिणाम बेचन गर्छौं। मानिसहरू हामीलाई सफ्टवेयरको लागि तिर्न सक्दैनन्, तिनीहरूले हामीलाई के गर्ने तिर्छन्
बेंटलेको वृद्धि ठूलो मात्रा मा अधिग्रहण मार्फत आएको छ। यो वर्ष ब्रिटिश थिए। सिङ्क्रो; योजना सफ्टवेयर र विराटनगर; भीड र पैदल यात्री म्यापिंग कार्यक्रम, युनाइटेड किंग्डममा व्यापक रूपमा ज्ञात र सम्मान गरिन्छ। बेंटले को डिजाइन र सम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली संग यसको एकीकरण यसको उपयोग को विस्तार र बुनियादी ढांचे सफ्टवेयर को ग्राहकहरु लाई थप मूल्य ल्याउनेछ। बेंटले पनि केहि घरको उत्पादन उत्पादन गर्दछ; 2019 "डिजिटल ट्विन" को अवधारणा सिर्जना गर्न खोज्ने आईटीविन सेवाको सुरुवात देख्नुहुनेछ, जुन बिल्डिङ सूचना मोडेलिंग (बीआईएम) को प्राकृतिक अन्त उत्पादन हो, र खुल्ला स्रोत लाइब्रेरी iModel.js जसले यसलाई खिलाड गर्नेछ। त्यो के थियो? खुला स्रोत? के हामी विश्वास गर्न चाहने छौं कि हामीले देख्न सक्ने केहि चीजहरू र खरीद गर्न सक्दैनौं यसको विकासकर्ताहरूको लागि पैसा उत्पन्न हुनेछ? त्यो व्याख्या गर्नुहोस्।
यस बर्षको धेरै बेंटिले अधिग्रहण भएको छ, जसले तपाईंलाई सबैभन्दा उत्साहित बनाएको छ?
म सजिलै धेरै चीजहरु को बारे मा जान्दछु, तर बैठे र फेरि मान्छे को वास्तव मा हाम्रो सफ्टवेयर संग के गर्छन मा फिर्ता देख रहे हो वास्तव मा sobering। हाम्रो उत्पादन प्रस्तावको साथ यी समाधानहरू एकीकरण गर्न एक अविश्वसनीय क्षमता छ। म यसलाई आकर्षक लगाउन को लागी सिंक्रो प्रयोगकर्ताहरु को लागि एक ठूलो अंतर कसरि बनाएको छ। मैले मानिसहरुलाई लेगुनीको बारेमा भन्नु भएकोले प्रभावित भएको छु। मलाई लाग्छ सबैजना लेनुको प्रयोग गर्नु पर्छ!
युनाइटेड किंग्डममा, हामीसँग अहिले सरकार भित्र ज्योतिषीय आयोग छ। भौगोलिक तथ्याङ्कका बारेमा यो के हो कि सरकारहरूले यसको मूल्यको मूल्यांकन गर्न चाहन्छ?
डिजिटल जानेको अवधारणा अनुनाद हुन थालेको छ। व्यक्तिहरूले बुझ्न थालेका छन् कि यदि ती जानकारीहरू छन् भने, यो शोषण गर्नुपर्दछ र सकेसम्म व्यापक रूपमा प्रयोग गरिनु पर्छ। केवल सहि समय र डाटाको अस्तित्वको अधिक माग रहेको छ। त्यो प्रवृत्ति जारी राख्न निश्चित छ। व्यक्तिहरू अधिक जानकारीमा अधिक पहुँचको माग गर्न गइरहेका छन् समय र अधिक फारम कारकहरूको साथ।
यो विचार सोचेको छ कि खुला स्रोत पुस्तकालय पुस्तकालय iModel.js पछि?
हामीले सिकेका छौं कि हाम्रो डिजाइन अनुप्रयोगहरूसँग सम्बन्धित फाइलहरूमा भण्डार गरिएको जानकारी अन्य धेरै बाह्य स्रोतहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्छ; GIS, मानचित्रण, सम्पत्ति र सडक प्रणाली, उदाहरण को लागी। र हामीलाई थाहा थियो कि त्यहाँ अझ राम्रो घटना ट्र्याकि and र अन्य प्रकारका प्रत्यक्ष रिपोर्टिंगको लागि कल आएको थियो। यसैले यो रोडको डिजाइनको साथ र सडकको सबैभन्दा भर्खरको ट्राफिकको साथ सडकको दृश्यसँग मेल खान स्वाभाविक देखिन्थ्यो। व्यक्तिसँग यस प्रकारको जानकारीको लागि अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्ने दैनिक अनुभवहरू छन्, र तिनीहरू बुझ्न सक्दैनन् किन यो गाह्रो हुनुपर्दछ। हामी ती जडानहरू सकेसम्म सजिलो बनाउनको लागि काम गरिरहनुपर्दछ।
त्यहाँ "गहिरो डेटा" को बारे मा धेरै कुरा हो, के यो साँच्चै के हो?
ईन्जिनियरिङ्को संसारमा, प्रत्येक आवेदन अपेक्षाकृत विशिष्ट समस्या समाधान गर्न डिजाइन गरिएको छ, र धेरै वर्ष वर्ष पहिले गर्भ भएका थिए। तिनीहरू आफ्नो डेटा एक तरिका मा भण्डारण गर्दछ जुन सजिलै संग सम्पादन अनुप्रयोग द्वारा पहुँच गरिन्छ। अधिकांश समय - र म आफ्नै आफ्नै अनुप्रयोगहरूको लागी बोल्छु - तर्क बुझ्न चाहन्छु कि जानकारी अनुप्रयोगमा छ, फाइलमा छैन। फाइल केवल बाइट्स को एक श्रृंखला हो र जब तपाईं अनुप्रयोग को बिना यसलाई बुझने को प्रयास गर्नुहोस, यो अपरिहार्य छ। अन्धकार भनेको अन्य अनुप्रयोगहरूले यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैन र यसलाई पूर्ण रूपमा कल्पना गर्न सक्दैन।
हामी कुनै पनि जस्तै यस परिस्थिति सिर्जना गर्न दोषी छौं। तर अहिले विश्वको अवस्था भनेको छ कि हामीसँग एक जटिल फाइलहरू छ जुन एकजुटकारी स्वतन्त्र फाइलहरूको स्ट्याक्सको विकास गर्न आवश्यक छ। कसैले यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। हामीसँग डेटा छ र तिनीहरू बहुमूल्य छन्, तर हामी तिनीहरूलाई बर्बाद गर्दैछौ।
खुला स्रोत बेंटेली को लागी एकदम ठूलो कदम हो, किन अहिले?
म यो लामो समयको लागि अधिवेशन गर्दै छु, तर तपाईले केवल कोड शरीर खोल्न सक्नुहुन्न जुन एन्क्रिप्शन तालाबमा छ। यदि हामीले केही वर्ष पहिले हाम्रो अनुप्रयोगहरूमा खुला स्रोत विकास गरेका थियौ, निर्माण प्रक्रिया धेरै जटिल थियो। बस व्याख्या कसरी यो कार्यले आकस्मिक पर्यवेक्षकको क्षमता भन्दा कम गर्दछ भनेर परिभाषित गर्दछ - र केवल सफल खुला स्रोत अनुप्रयोगहरू हुन् जुन आकस्मिक निरीक्षकले को अर्थ बनाउन सक्छ। सम्भवतः आकस्मिक निरीक्षकले हाल कुनै चीज परिवर्तन गर्दैन, तर तिनीहरू खुला स्रोतको कारण हुन् - यो कारणले गर्दा मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् किनभने यो डिजाइन गरिएको थिएन।
जब हामीले हाम्रो परियोजनासँग आईमोडल्समा सुरू गरे, हामीले सोचेका छौ कि यो मूल्यवान हुनेछैन जबसम्म यो व्यक्तिले यसको लागि डिजाइन गरिएको थिएन। हामीलाई एक तरिका चाहिन्छ जसमा मानिसहरूले "बेन्टले स्कूल" मा जान सकेन यसको प्रयोग गर्न सक्दछ। हामीले जाभास्क्रिप्टलाई आदर्श भाषाको रूपमा रोज्यौं। जाभास्क्रिप्ट सबै ठाँउ हो। यो अचम्म छ कि उसले आईटी संसारको नियन्त्रण कसरी गर्यो। त्यसपछि हामीले पहिले धेरै पटक कोडहरू, अहिले जाभास्क्रिप्टमा लिखित रूपान्तरण गर्न थाल्नुभयो। हामीले राम्रो हेर्न को लागी एक टनको लगानी गर्न थालेको छ, राम्रो तरिकाले दस्तावेज गरौं र राम्रोसँग टिप्पणी गरौं कि हामी खुला स्रोत पहुँचको मूल्यको रूपमा बेच्न सक्छौं। म तपाईलाई बताउन सक्दिन कि खुल्ला स्रोत परियोजनाहरू फ्यानफेयरसँग विज्ञापित छन् र त्यसपछि बेवास्ता गरियो!
हामी यो आशा गर्दैनौं किनभने यो अवस्थित छ, मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गर्छन्। हामीले यो प्रमाणित गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ कि आईमोडेल.js प्रयोग गरी लगानी र समयको लायक छ।
के तपाइँले खुला स्रोतमाथि बेंलीले कुनै पनि प्रतिरोधको सामना गर्नुभयो?
धेरै! बेन्टले सिस्टम्समा एक बलियो हाल थियो जुन भने यो एक भयानक विचार थियो। हामी एक सफ्टवेयर कम्पनी हो। हामी सफ्टवेयर बेच्छौं। मानिसहरूले विश्वास गर्थे कि म बेच्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। र मैले व्याख्या गर्न खोजेको छु कि हामी वास्तव मा सफ्टवेयर बेच्दैनौं, हामी सफ्टवेयर नतिजा बेचछौं। मानिसहरू हामीलाई सफ्टवेयरको लागि तिर्न सक्दैनन्, तिनीहरूले हामीलाई के गर्ने तिर्छन्।
यसको मतलब व्यवसाय मोडेलमा परिवर्तन आएको छ। माइक्रोसफ्टले निर्णय गरे कि Azure भनेको जनतालाई लिनक्स प्रयोग गर्न मद्दतको लागि पैसा कमाउने तरीका हो। हाम्रो नयाँ आईटविन सदस्यता संग, हामी भन्न सक्छौं; यहाँ प्रोग्रामको सम्पूर्ण स्रोत छ जुन डाटा सिर्जना गर्दछ र भिजुअलाइज गर्दछ, तपाईंले यसको लागि तिर्नु पर्दैन, हामी तपाईंलाई आईट्विन सदस्यता लिनका लागि शुल्क लिनेछौं र तपाईंसँग एप्लिकेसनहरूको विशाल समुद्री उपलब्ध हुनेछ। केही मानिसहरूले यसलाई दिनेछन्। केहि गर्दैन। तर जाभास्क्रिप्टको विश्वमा हामीले जताततै भेट्टाएको इकोसिस्टम कुनै पनि पछि दोस्रो छैन। तपाईं जाभास्क्रिप्टको लागि बन्द स्रोत प्रतिस्पर्धी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। यो काम गर्दैन।
तपाईंले भन्नुभयो कि धेरै खुल्ला स्रोत सफ्टवेयर बेवास्ता गरिएको छ, तपाईलाई चासो लिनको लागी के तपाईले चुनौती पाउनुभयो?
मान्छेलाई प्राथमिकता दिनुहोस् यो कुनै होइन। 1। तर त्यो केवल खेलको सुरुवात हो। त्यसपछि तिनीहरूले यो प्रमाणित गर्नेछन्। तिनीहरूसँग प्रश्नहरू छन्। तिनीहरू समस्या हुने छन्। तिनीहरू परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। तिनीहरूले वैकल्पिक विचारहरू सुझाव गर्नेछन्। यी सबै स्तरहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुनु भनेको खुला स्रोत परियोजनाले राम्रो काम गर्दछ।
खुला स्रोत सफ्टवेयरले मानिसलाई सोच्नका लागि महत्त्वपूर्ण जन प्राप्त गर्नैपर्छ जुन ठूलो मुद्दाको भाग हो। कसैले कुनै कुरामा काम गर्न चाहँदैनन् भने उनीहरूले मर्छन् भन्ने सोच्न सक्छन्। खुला स्रोत हुनुको मतलब यो होइन कि मान्छे जादुई हाम्रो साथ साथ र हाम्रो उत्पादनहरु को भाइरल प्रयोगकर्ताहरु हुनेछ। हामी त्यो सच आउन पर्छ।
म Google र अरूलाई उनीहरूको परियोजनामा ​​राख्ने प्रयासको मात्रामा सधैं प्रभावित हुन्छु। तिनीहरू केहि खुला स्रोत गर्छन, र त्यसपछि तिनीहरूले बेचन गर्न एक विपणन दल राखे। यदि तपाइँ केहि सोध्नुहुन्छ भने, कसैले तपाईंलाई जवाफ दिन्छ। तपाइँसँग कुनै पनि समस्या छ, वहाँ त्यहाँ तपाईंको सहयोग गर्न त्यहाँ छ, सधैं मूल स्रोतबाट फोरम र अनलाइन समुदायबाट। तिनीहरूका उदाहरणहरूको एकदमै पारिस्थितिकी तंत्र छ। यो आफैले खाना खान्छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ एक कार्यक्रम लेखन गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो स्रोत कोड प्रकाशित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो केहि अपारदर्शी र जटिल हुन सक्छ। यदि तपाईं काम गर्नुहुन्छ भने, काम। तर यदि तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि प्रयोगकर्ताले आफ्नो तहका चीजहरू माथिको माथि राख्न सक्दछन् भने, यदि यो सुझाव दिन्छ कि यो अन्य मान्छेको कामको लागि प्रविष्टिको बिन्दु छ भने, तपाईं साबित हुनु पर्छ कि उनीहरूको समयको लायक छ। यो अगाडी स्पष्ट कदम होइन। दस वर्ष पहिले मैले भनेँ; कुनै तरिका, यो धेरै गाह्रो छ। तर आईटीविन सब्सक्रिप्शन मोडेलको साथ संयोजन र तथ्य यह है कि खुला स्रोत संसार को लागि पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित गरिएको छ, यसको अर्थ छ कि हामी यसमा पूंजीकरण को आशा गर्छन।
हालैका वर्षहरूमा हामीले सबैभन्दा ठूलो कम्पनीहरू बीच माइक्रोसफ्ट, बेन्टले काम गर्दछौं माइक्रोसफ्ट, सिमेन्स र टपकोनसँग अन्य कामहरूमा, किन त्यस्तो छ?
केही वर्ष अघि हामी वास्तवमा कहिल्यै पनि विकसित गर्न सकेनौं। केही समयको लागि, हामीले भनेका छौं कि हामी तटस्थ छौं र हामीले सबैलाई समान रूपमा समर्थन गर्दछौ। तर टोपकोन र सिमेन्स र अरूहरू आए, र यो काम गर्न सक्ने एक मोड जस्तो देखिन्छ; हामी दुवै लाभ पाउनेछौं। कहिलेकाहीँ हामीसँग हामीले के गरौं / सीमाको बीचमा हुनु पर्छ जहाँ बारेमा बहस गरेका छौं र तिनीहरूले हामीलाई कति तिर्नुपर्छ / कति भुक्तान गर्नुपर्दछ। तर मलाई लाग्छ कि हामी दुवै भन्दा राम्रो छ भन्दा तुलनामा यदि हामी यी सहयोगी सम्झौताहरू थिएनौं।
Topcon को मामला मा, हामी एक साथ काम गर्छ जब यो हाम्रो प्राथमिकताहरु संग राम्रो संग संरेखित गर्दछ। हामी सधैं तिनीहरूलाई तिनीहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सूचित गर्न कोसिस गर्ने प्रयास गर्दछु, ताकि ओभरलैप गर्न सकिएन। तपाईं सबैसँग यो गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाइँसँग सबैसँग यो सम्बन्ध छ भने एक विशेष सम्बन्ध अब विशेष छैन। सहयोग सहयोग सम्झौताको यो विचार, जहाँ हामी वर्तमानमा घटनाक्रममा सामेल हुदैछौं, धेरै राम्रो काम गर्दै एक मोड बनिरहेको छ। मैले भविष्यवाणी गरेन। वास्तवमा, म अवधारणामा एक विश्वासी थिएन, तर म खुसी छु कि उनीहरूले गलत थियो भनेर प्रमाणित गर्न सक्थे।
Bentley को संस्थापक को रूप मा, तपाईं को सबै भन्दा अधिक गर्व छ?
हामीले 105 अधिग्रहण गरेका छौं, यिनी मध्ये केहि अधिक प्रामाणिक छन् वा अन्य भन्दा बढी लामो समय सम्म छ। तर के हामीले धेरै पटक प्राप्त गरेका असल मानिसहरू साँच्चै राम्रो मान्छे हो। हाम्रा सहकर्मीहरूको ठूलो प्रतिशत यी अधिग्रहणको माध्यमबाट आयो। यदि तपाईं सानो व्यवसाय हुनुहुन्छ र ठूलो कम्पनीको आकलन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ दुई मार्गहरू तपाईं पछ्याउन सक्नुहुन्छ: आफ्नो बाटो पछ्याउनुहोस् र सानो कम्पनीमा फर्कनुहोस्, वा अवसर हेर्नुहोस्। हामीले रहन केहि बुद्धिमानी मान्छेलाई समझायौं।
हामी १० 105 कम्पनीहरूको संयोजन हो जुन वर्षौं बितिसकेका छन्। मैले यो सुरु गरेको हुन सक्छ, तर हामी के बनेका लागि म धेरै क्रेडिट लिन सक्दिन। जब म दर्शकको पछाडि बस्छु र सि Sy्क्रो डेमो हेर्नुहोस्, जसलाई अब "बेन्टली सिन्क्रो" भनिन्छ, म आफैलाई सोच्छु, यार, ती केटाहरू यति स्मार्ट छन्। म उहाँको प्रतिबिम्बित महिमामा बाँचिरहेछु। मैले केहि वर्ष पहिले Acute3D प्राप्त गर्ने बारेमा पनि त्यस्तै महसुस गरें। ती मान्छे चतुर छन्। तिनीहरूले यो अद्भुत उपकरण सिर्जना गरे। हामी यसलाई प्राप्त गर्छौं। म उसलाई हेर्छु, र म आफैलाई भन्छु, लानत, मेरो नाम त्यहाँ छ। त्यो धेरै राम्रो छ।
अहिले तपाईं बेंटिलेको आकारको बारेमा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ?
जब हामीले सुरु गर्यौं, मैले भर्खरै बिल भुक्तानी गर्न व्यवसायमा रहन खोजेँ। समयको एक पटक, मैले बेन्ले सिस्टम्सका लागि काम गर्ने हरेक व्यक्तिलाई थाहा थियो। मलाई थाहा थियो कि तिनीहरूले के गर्दै थिए। उहाँ आफ्ना छोराछोरीलाई जान्नुहुन्थ्यो। त्यो अहिले फरक छ। हामीले समस्याको रिक्त स्थानमा विस्तार गरेका छौ जुन हामीले शुरुमा सामना गर्यौं। हामीले बजारहरूमा विस्तार गरेका छौं जुन हाम्रो सामान्य बजार थिएन। हाम्रो पहुँच धेरै भन्दा बढि छ यदि हामी मात्र संगठनात्मक हुन्थ्यो भने। Bentley सुरु गर्ने आधार के थियो? म ड्युपन्टको लागि काम गर्दै थिएँ, जो एक इन्टरग्राफ प्रयोगकर्ता थियो। मेरो भाइ बैरीले आफ्नै सफ्टवेयर कम्पनीको शुरु गरेको थियो, र मैले उसलाई काम गर्न ड्युपन्ट छोडे। यसबाहेक, ड्युपन्टले मलाई केही सफ्टवेयर सुधार गर्न आग्रह गरे जुन मैले त्यहाँ काम गरें। मैले तिनीहरूलाई भनेँ, म यसलाई सुधार गर्नेछु भने उनीहरूले मलाई बेच्न अधिकार दिए। र त्यो सुरुवात थियो। मैले बेंटाली सिस्टम्स सुरू गरे र सीएडी सफ्टवेयर बेचेर सुरु गर्यो।
हामी 2016 मा ग्रेग बेंटले फिर्ता साक्षात्कार गरे र उहाँलाई सोध्नुभयो के यो आफ्ना भाइहरूसँग काम गर्ने जस्तै थियो, यो तिमीलाई कस्तो लाग्छ?
म तपाईंलाई सल्लाह नगर्छु! तर यो अपेक्षाकृत राम्रो छ। हामी कहिल्यै साँच्चै पूर्ण योजना थिएनौं। जब हामीले कम्पनी सुरू गर्यो, त्यहाँ हामी त्यहाँ5जना त्यहाँ त्यहाँ काम गर्दै थिए र मेरी आमालाई पिटेको थियो। उनले विश्वास गर्न सकेन कि सफ्टवेयर वास्तविक थियो। तपाईंले विचार गर्न सक्नुहुन्न कि मान्छेले केहि कुराको लागि तिर्नेछ जुन तिनीहरूले हेर्दैनन्। उनी साँच्चै चिन्तित थिए कि उनको पाँच छोराछोरी बेरोजगार हुनेछ र घर फर्किन्छन्।
तपाईं 2019 मा Bentley बाट धेरै भन्दा अपेक्षा गर्नुहुन्छ?
डिजिटल ट्विनको अवधारणा। कसैले यसलाई बनाउन जाँदैछ। जो पनि यो वास्तवमा विकास गर्दछ अहिले अहिले अवस्थित भन्दा ठूलो बजारको अवसर हुने छ। यो अवसर, यस विच्छेदबिन्दु उद्योगमा हालको विच्छेदन गरिएको दुनिया र डिजिटल ट्विन संसारको बीचमा एक महान संक्रमण हो जुन एक बजार हो जुन हामीले सकेसम्म छिटो गल्ती गर्नुपर्दछ। 2019 हाम्रो लागि एक वर्ष हुन सक्छ।
म कम्प्युटर दिनहरूको सुरूमा थिएँ। कम्प्युटर एकदम नयाँ थियो, र सबैले के चीजहरू सम्भव छ भनेर अनुमान लगाउँदै थिए। मलाई लाग्छ कि हामी फेरि डिजिटल जुम्ल्याहाको साथ फेरि ढोकामा छौं। यो नयाँ अवधारणा होईन, निर्माण र पूर्वाधार यसमा ल्यागर्डहरू हुन्। यदि मैले २०१ 2018 मा व्यापारको विकासको तरीकामा हेर्ने हो भने, यो हामीले १ 1984।3मा शुरू गरेको भन्दा फरक देखिन। हो, हामीसँग डिजिटल कागज छ। हो, हामीसँग थ्रीडी मोडलहरू छन्। तर सम्झौताहरूले उही कुरा बोल्दछ, र व्यक्तिहरू सामान्य रूपमा पहिले जस्तै क्रमबद्ध तरीकामा निर्माण गर्दछन्। Syncro जस्ता चीजहरू क्रान्तिकारी छन्, तर ती व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदैन। यस अर्को चरणमा, धेरै चीजहरू फरक हुन गइरहेका छन्।
कुनै पनि नतिजा जुन डिजिटल ट्विन संसारमा सिर्जना गरिएका अवसरोंबाट बाहिर आउँछ, खुला स्रोत संसारमा जाँदैछ। म यसको पक्का छु। म वैसे पनि उनको साथ प्रतिस्पर्धा गर्न को लागि दुखाइ हुनेछ, त्यसैले हामी नेतृत्व लिन चाहन्छौं। लगभग 35 वर्ष पछि, सजिलो छ, भन्नको लागि, मैले गरे। तर म महसुस गर्छु हामी दौडको शुरुवात रेखामा छौं जुन अर्को सुनको भागमा पुग्न जाँदैछ।
कीथ बेंटले, संस्थापक र सीटीओ, बेन्टले सिस्टम्स, डारारेल स्मार्ट र अबीगेल टमकिन्ससँग कुराकानी गर्दै।
CES डिसेम्बर 2018 / जनवरी 2019
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो बिग्रेको वा भर्चुअल वास्तविकता? प्रोजेक्ट प्रस्तुत गर्ने को लागी राम्रो छ?
अर्को पोस्ट ल्यान्डवेयर प्रयोग गरेर उपग्रह छविहरू अन्वेषण गर्नुहोस् र विश्लेषण निकाल्नुहोस्अर्को »